ဖာဘရီဂတ်စ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ လေးစားစရာကောင်းပါတယ်
ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ ဖာဘရီဂတ်စ် Cesc Fabregas
18 Oct 2018 . 6:37 PM
ချယ်လ်ဆီးအသင်း ကွင်းလယ်လူ ဖာဘရီဂတ်စ် Cesc Fabregas ဟာ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖာဘရီဂတ်စ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပွဲအရေအတွက်အနည်းဆုံးနဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု အကြိမ်(၁၀၀)ပြည့်ခဲ့လို့ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖာဘရီဂတ်စ်ဟာ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်က စတုတ်စီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၀၀)ပြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၂)နှစ်အကြာမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖာဘီဂတ်စ်အနေနဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၀၀)ပြည့်ဖို့ (၂၉၃)ပွဲသာ ကစားခဲ့ရပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံး မန်ယူအသင်းဂန္ထ၀င် ကစားသမား ရိုင်ယန်ဂစ် Ryan Giggs ထက် (၇၄)ပွဲအထိ လျော့နည်းခဲ့တယ်။ ရိုင်ယန်ဂစ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၀၀)ပြည့်ဖို့ (၃၆၇)ပွဲအထိ ကစားခဲ့ရတာပါ။ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဖာဘရီဂတ်စ်က “ကျွန်တော်ဟာ မြန်လည်း မမြန်ပါဘူး။ ကြံ့ခိုင်မှုလည်း မကောင်းဘူး၊ Flexible ဖြစ်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး မဟုတ်သလို အမြင့်ဘောတွေလည်း အားမသန်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆု ကျွန်တော့်ကစားသမား ဘ၀တစ်လျှောက် ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးဖန်တီးပေးဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော့်အလုပ်ဖြစ်ပြီး အဲဒါကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောရမှာပါ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ဂိုးဖန်တီးမှု အများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရိုင်ယန်ဂစ်က (၁၆၂)ကြိမ်နဲ့ ထိပ်ဆုံးဖြစ်နေပြီး ဖာဘရီဂတ်စ်က (၁၁၁)ကြိမ်နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် ဂိုးဖန်တီးမှု အများဆုံးကစားသမားများ
1. Ryan Giggs Manchester United 162
2. Cesc Fàbregas Chelsea 111
8. James Milner Liverpool -80
9. Teddy Sheringham – 76
10. David Silva Manchester City -75
Photo:SPORTbible,Best World News,Mpasho
ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျမှတျတမျးဆုကို လကျခံရရှိခဲ့တဲ့ ဖာဘရီဂတျဈ Cesc Fabregas
ခယျြလျဆီးအသငျး ကှငျးလယျလူ ဖာဘရီဂတျဈ Cesc Fabregas ဟာ ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျမှတျတမျးဆုကို လကျခံရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဖာဘရီဂတျဈဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပှဲအရအေတှကျအနညျးဆုံးနဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု အကွိမျ(၁၀၀)ပွညျ့ခဲ့လို့ ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျဝငျခဲ့ပွီး အဲဒီအတှကျ ဂုဏျပွုမှတျတမျး ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဖာဘရီဂတျဈဟာ ၂၀၁၆၊ ဒီဇငျဘာလ(၃၁)ရကျက စတုတျစီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဂိုးဖနျတီးမှု (၁၀၀)ပွညျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး (၂)နှဈအကွာမှ ဂုဏျပွုမှတျတမျး ရရှိခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဖာဘီဂတျဈအနနေဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု (၁၀၀)ပွညျ့ဖို့ (၂၉၃)ပှဲသာ ကစားခဲ့ရပွီး ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှုအမြားဆုံး မနျယူအသငျးဂန်ထဝငျ ကစားသမား ရိုငျယနျဂဈ Ryan Giggs ထကျ (၇၄)ပှဲအထိ လြော့နညျးခဲ့တယျ။ ရိုငျယနျဂဈဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဂိုးဖနျတီးမှု (၁၀၀)ပွညျ့ဖို့ (၃၆၇)ပှဲအထိ ကစားခဲ့ရတာပါ။ ဂုဏျပွုမှတျတမျး ရရှိခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ဖာဘရီဂတျဈက “ကြှနျတျောဟာ မွနျလညျး မမွနျပါဘူး။ ကွံ့ခိုငျမှုလညျး မကောငျးဘူး၊ Flexible ဖွဈတဲ့ ကစားသမားတဈဦး မဟုတျသလို အမွငျ့ဘောတှလေညျး အားမသနျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီဆု ကြှနျတေျာ့ကစားသမား ဘဝတဈလြှောကျ ဂုဏျယူစရာအကောငျးဆုံးဆုဖွဈပါတယျ။ ဂိုးဖနျတီးပေးဖို့ဆိုတာက ကြှနျတေျာ့အလုပျဖွဈပွီး အဲဒါကို အကောငျးဆုံး လုပျပွနိုငျခဲ့ပွီလို့ပွောရမှာပါ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ ဂိုးဖနျတီးမှု အမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရိုငျယနျဂဈက (၁၆၂)ကွိမျနဲ့ ထိပျဆုံးဖွဈနပွေီး ဖာဘရီဂတျဈက (၁၁၁)ကွိမျနဲ့ ဒုတိယနရောမှာရှိနပေါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ ဂိုးဖနျတီးမှု အမြားဆုံးကစားသမားမြား